बिराटनगरमा खुल्यो जोगाड सर्भिस, बेरोजगार युवाहरुमा उत्साह - Khotang Post
नेपालको कुनै एक युवालाई यहाँको प्रमुख समस्या के हो भनेर सोध्ने हो भने झट्ट उसको मस्तिष्कमा आउने शब्द हुन्छ, बेरोजगारी । विषेशगरी देशका युवा पिडी यस् समस्याबाट यसरी पिल्सिएका छन् कि उनीहरू सोच्छन्, अबको गन्तव्य विदेश नै हो । सामान्यतया कुनै एक स्थानमा रोजगारीको अबसर प्राप्त भयो भने सोर्स, पावर र कुनै सम्झौता नगरी त्यहाँ काम पाइदैंन । अर्कोतर्फ व्यवसायीहरूले पनि योग्य, ईमानदार र कर्मशील कामदार नपाई सोर्स-फोर्सको माध्यमबाट आएका कच्चा कामदार पाउने अबस्था ब्याप्त छ ।
देशमा व्याप्त बेरोजगारी र व्यवसायीले भनेजस्तो कामदार नपाउनु आजको नेपालको प्रमुख समस्या भइरहदा ‘नेपालमा भनेजस्तो रोजगार पाइँदैन’ भन्ने मानसिकताले विदेश पलायन हुन खोज्ने शैक्षिक बेरोजगारको सङ्ख्या दिन दुई गुणा रात चौगुणा बढेको अवस्था छ भने सँगै व्यवसायीले आफूले भनेजस्तो कामदार नपाउँदा आफूले गरेको व्यवसायमा उचित प्रतिफल पाउन नसकेको व्यबसायीहरु गुनासो गर्दछन् । विश्व प्रविधिमय बनिरहँदा नेपाल पनि त्यसवाट अछुतो भने रहेको छैन । तर प्राविधिक ज्ञान हुने युवायुवती विदेश पलायन हुदा नेपालमा प्रविधिमैत्री ब्यबसाय संचालन गर्न एकदमै कठिन देखिन्छ ।
बेरोजगारी नै वर्तमान नेपालको प्रमुख समस्या हो भने यसको समाधान चाहिँ के हो त? यसको जवाफ ‘जोगाड’ कम्पनीसँग छ ।
जोगाड कम्पनी स्थानीय युवाहरू मिलेर सुरु गरिएको व्यवसायिक सेवा हो । यसको स्थापना २०७८ मा विराटनगर वडा नं. ७ मोरङमा भएको हो भने प्रबन्ध निर्देशक सुरेश मिश्र हुन् । ‘देशको यो किसिमको बेरोजगारीबाट कुनैबेला म आफै पनि पीडित थिए ।’ मिश्र भन्छन्, ‘त्यसैले युवावर्गको समस्या केही मात्रामा समाधान गर्ने कोसिसले यस् कम्पनीको जन्म भएको हो ।’ यसको प्रमुख उदेश्य अनलाइन प्रविधिको माध्यबाट विभिन्न सेवा गर्नु हो । यसले आफ्नो www.jogaad.com नामको आफ्नै वेब ठेगानामार्फत विभिन्न प्रकारका अनलाइन सेवाहरू प्रदान गरिरहेको छ । यस्ता सेवाहरूमा अनलाइन मोटरसाइकल मर्मत सेवा, अनलाइन माध्यमबाट मोटरसाइकल पार्टस् बिक्रीवितरण, विभिन्न सामानहरू अनलाइन डेलिभरी लगायतका सेवाहरू प्रदान गर्दै आएको छ । बद्लिदो बिज्ञान तथा प्रबिधिको युगमा धेरै मानिसहरू अनलाइन सर्भिसमा भरपर्ने अबस्थालाई मध्यनजर गर्दै सेवा सुरु गरिएको कम्पनीको भनाइ छ ।
त्यस्तै, यस जोगाड सर्भिसले ‘जनशक्ति जोगाड‘ को अवधारणा पनि अघि सारेको छ । यस अवधारणाको सफल प्रयोगबाट उद्योगी व्यवसायीले विश्वसनीय जनशक्ति नपाउने तथा जनशक्तिले रोजगार नपाउने हालको समस्या केही भए पनि न्यून गर्न सहयोग पुग्ने छ भन्ने यस कम्पनीको विश्वास छ । यस कम्पनीले उपलब्ध श्रम शक्तिलाई निजीक्षेत्रबाट सिप र प्रविधियुक्त तालिमको प्रबन्धबाट बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न प्रयास गर्छ । यसबाट व्यवसायीहरूले गुणस्तरीय र दक्ष कर्मचारीहरु पाउनेछन भन्ने कुराको विश्वास जोगाड सेवाले लिएको छ ।
समग्रमा रोजगारदाता र दक्ष जनशक्ति बीच सेतु बन्ने उद्देश्यले जोगाड सेवा विराटनगरले ‘जनशक्ति जोगाड’को अवाधारणालाई अघि सारेको हो । यस सेवा अन्तर्गत बेरोजगार जनशक्तिलाई रोजगार हुनका लागि उचित परामर्श, सल्लाह र विभिन्न प्राविधिक प्रशिक्षणमा सहभागी हुन प्रोत्साहन गरेर दक्ष जनशक्तिको निर्माणमा जोड दिने गरेको छ । साथै उपलब्ध दक्ष जनशक्तिलाई विभिन्न उद्योग, व्यवसाय, आदि क्षेत्रमा उपलब्ध गराएर रोजगार हुन मद्दत गर्दछ । यस जोगाड सर्भिसले रोजगारदाता उद्योगी, व्यवसायी तथा जनशक्ति बीचमा रहेको दुरीलाई जोड्ने माध्यम बनेर दुवै पक्षको आवश्यकतालाई पूरा गर्ने काम गर्छ । हाल पुर्वका सिमित स्थानहरु मात्र लक्षित गरि सेवा सुरु गरेको यस् कम्पनीले भविष्यमा देशभर काम गर्ने योजना राखेको छ ।
बुधबार, भाद्र ३०, २०७८मा प्रकाशित गरिएको